Rob Zombie egosila na ihe nkiri ya ga - emegharị 'The Munsters' TV Sitcom
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Rob Zombie egosila na ihe nkiri ya ga - emegharị 'The Munsters' TV Sitcom
by Trey Hilburn III June 7, 2021 2,916 echiche
Rob Zombie bụ ntakịrị nke kaadị anụ ọhịa. Site na Oflọ 1000 Ndị agha na 31, Zombie abụwo ikike a na-agụ na ngụkọta nke nkewa n'etiti ndị Fans. Rob Zombie bụ onye kwupụtara onwe ya Ndị Munsters onye ofufe. Ọbụna na-agbazinye olu ya na nkọwa na-adịbeghị anya maka Ndị Munsters blu ray nkọwa track. Nwanyị ahụ, ọbụna nwere mkpanaka ọkụ na-ekpo ọkụ aha ya bụ Dragula Ndị Munsters ugbo ala. Zombie ugbu a kwadoro asịrị a kwenyere na ogologo oge na ọ ga-eme mgbanwe nke TV sitcom Ndị Munsters.
Ọ dị ka eziokwu na Zombie na-aga Budapest ka ọ rụọ ọrụ na ngwụcha afọ a bụ eziokwu maka Munsters. Anyị na-atụ anya ịhụ ndị na-ahụkarị naNdị Munsters fam. Malite na nwunye Sheri Moon Zombie dị ka Lily Munster, na Jeff Daniel Phillips ka ha nwee ike ịkpọ Herman.
Ihe osise Universal agbatabeghị aka. Mana, anyi nwere olile anya na nke a bu eziokwu na Zombie abughi nzuzu. Ọ bụ nzuzu iche echiche PG ma ọ bụ PG-13 Zombie. Agbanyeghị, echere m na Eli Roth wepụrụ ya Withlọ ahụ nwere elekere na ya bụ Mgbidi, ya mere enwere ike ya kwere omume.
Gịnị ka unu chere banyere itinye aka nke Rob Zombie na a Ndị ọjọọ mmegharị? Chee na obu onye ziri ezi? Mee ka anyi mara na ngalaba a.
House of Wax na-abịa mkpoko mbipụta blu ray si mkpu ụlọ Factory anya. Gụkwuo ma dezie akwụkwọ gị ebe a.